Indlela Idatha Yomkhiqizo Ithinta I-SEO: Insight From Semalt
Kunoma yiliphi ibhizinisi le-e-commerce, ukusebenza kahle kwe-search engine ngokuvamile kuyasizainkinga ekuphumeleleni kwayo. Amasu amaningi we-SEO awagxila emkhakheni wemininingwane yomkhiqizo. Bagxila ezintweni ezinjengezihluthulelo zokusesha,ukuxhuma emuva, ukuxhumana komphakathi kanye nobuchwepheshe bewebhusayithi. Kodwa-ke, ezinye izinto ezingaqondile zingathinta imiphumela yakho ye-SEO futhi.
uJack Miller, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende i-Semalt Amasevisi weDivaysi achaza ukuthi idatha yomkhiqizo ithonya kanjani ukusebenza kwakho - sailun s617.
Idatha yomkhiqizo ayithinti ngqo i-SEO. Noma kunjalo, noma yini echaphazela ukuxhumanisa kwangaphakathi,I-URL kanye nokuqukethwe kunakho konke okumele kuthinte isigaba sokucinga sezinto eziphilayo. Lapho ugcwalisa iwebhusayithi yakho nedatha, ulwazi olufana nalokhuimikhakha yomkhiqizo, amaqembu, nokuqukethwe kubonakala kuwo wonke umkhiqizo owenezela ohlelweni. Wonke amawebhusayithi anokuphathwa kokuqukethweuhlelo olulawula lolu lwazi ngokuhlola amabhokisi ku-database yayo. Zonke lezi zinsimu kanye nokuhlola amabhokisi kunomthelela ekuqinisekisweniyonke imikhiqizo kanye nolwazi lwayo.
Idatha yomkhiqizo nokuxhumanisa kwangaphakathi
i-SEO ihlanganisa izici ezifana nokuhlelwa kwezihloko zomkhiqizo, ama-URL nezincazelo.Ngakolunye uhlangothi, idatha yomkhiqizo ithinta indlela ulwazi oluvela ngayo kulwazi lewebhu. Yeka ukuthi umkhiqizo uhlukaniswa kanjani, uhlanganiswe, uhlangenefuthi okubhalwe phansi kunomthelela ekuhlobaneni kokuqukethwe komsebenzisi. Lesi sici esinye sezici i-Google algorithm igxile ngenkathikucubungula uhlelo lokuphathwa kokuqukethwe ukuze lubekwe.
Isibonelo, indlela yokuchofoza yesigaba ingaba - I-Target> amashirts> amashirts omadoda>isigamu sesigamu. Kulesi sayithi, ungathenga ihembe lentamo eligcwele eliyingxenye yeshirts kanye nesigaba samadoda. Lapha, egcweleIkhanda lentamo lingokwesigaba shirts kodwa nakwesigaba sezintambo zezintambo. Igama lomkhiqizo yisihloko se-H2 kanye nezici zokuchazakuncazelo ye-meta.
Okuqukethwe okuphindaphindiwe kwenzeka lapho injini yokusesha ihlanganisa ama-URL amaningi athola okufanayoikhasi. Isibonelo, izixhumanisi eziphindaphindiwe zingalawulwa ngokusebenzisa amathegi we-canonical. Okuqukethwe okuphindaphindiwe kungalimaza ku-SEO yakho. Ihlisa iigunya lekhasi kusukela ithrafikhi ikwabelwana ngama-URL amaningi enza kube nzima ukukala.
Nokho, ukulungisa okuqukethwe okuphindaphindiwe kulula. Omunye udinga ukuthola konkeama-URL akhomba eminye imikhiqizo efanayo. Ukuqondisa kabusha izixhumanisi kuya ekhasini oyifunayo kungakusiza ukuthi ubuyisele amandla alokhowebsite ethize. Isibonelo, ukubhala kabusha ikhodi noma ukubeka amakhodi angu-301 aqondisa kabusha angalungisa le nkinga futhi abuyisele indlela amakhasi e-site 'afaka ngayo.
I-SEO ibalulekile kunoma yiliphi ibhizinisi le-intanethi ngokushesha nje lapho liqinisekisa ukuqina okukhona kwe-inthanethi.Izici eziningi zingathinta ukusebenza kwewebhusayithi kuze kufinyelele ekubanjeni izici zokubeka izinto. Phakathi kwalezi zici kukhona idatha yomkhiqizo. Kubaningiamacala, abathengisi be-digital abahluleka ukubona ukuthi kubaluleke kangakanani ku-SEO futhi ngokuvamile baqede ukuzinaki. Nokho, njengoba kuboniswe ngenhla, noma yikuphi okuthinta ama-URLfuthi ukuhambisana kokuqukethwe kunomthelela wokuthi iGoogle izobeka kanjani isayithi. Ukusebenzisa ulwazi olungenhla, umuntu angabonisa ukuthi yiziphi izinto ezizokwenzakuthinta indlela i-website eyenziwa ngayo mayelana nolwazi lomkhiqizo. Kungenzeka futhi ukulungisa ezinye zeziphambeko ezivamile ezifana nokulahlekaizigaba noma ulwazi lomkhiqizo.